Home News Wasiir Xoosh”Nidaamka Federaalka Waa magac ahaan Mana Gaarsiisno Heerkii la rabay”
Wasiir Xoosh”Nidaamka Federaalka Waa magac ahaan Mana Gaarsiisno Heerkii la rabay”
Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in meelo badan uu mugdi ku jiro dib u eegista dastuurka kadib.
Dhanka Luuqada uu ku qoran yahay ayuu tibaaxay in aanan wanaagsaneen, wasaaraddiisana ay ku howlgan tahay hagaajinta qaladaadkaasi u muuqda sida uu hadalka u dhigay.
Wasiir Xoosh ayaa dhanka kale soo hadal qaaday Nidaamka Federaalka ee Dowladda qaaday, waxa uuna tilmaamay in magac ahaan oo kaliya uu yahay Federaalka balse aanan gaarsiisneen Heerkii la rabay.
Waxa uu tusaale u soo qaatay in aanan qeexneen awoodaha Dowladda iyo Dowlad Goboleedyada, isagoona ku baaqay in ka wasaarad ahaan uu isku howli doono ka dhabeynta Arrintaasi.
Khilaaf u dhaxeeyo Wasaaradda Dastuurka iyo Guddiyada labada Gole u qaabilsan dib u eegista Dastuurka iyo kan Madaxa Banaan ayaa banaanka yimid kadib markii guddiyada ay sheegeen in ay joojiyeen Wada shaqeyntii Wasiir Xoosh.
Guddiyada iyo Wasaaradda ayaa kulamo iyo shirar gaar gaar ah ka kala wada Magaalada Muqdisho, waxa ayna sheegayaan labada dhinac in dhan waliba uu ku taagan yahay wadada sharciga ah.
Deadly suicide car bombing rocks Somali capital
Al-Shabaab attack KDF base in Somalia as bomb blast kill two in port city
Somalis enjoy first public film screening in 30 years
Farmaajo set to appoint new NISA boss after Fahad Yasin’s exit
Amina Cali (Amina Sonna) - September 25, 2021
Outgoing President Mohamed Abdullahi Farmaajo is set to appoint a new director for the National Intelligence Security Agency , MOL has learned, in a...
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - September 25, 2021
Multiple people were killed in Somalia's capital on Saturday after a suicide car bombing that targeted a security checkpoint near the presidential palace, police...
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - September 24, 2021
Al-Shabaab militants attacked a Kenya Defense Forces Forward Operating Base in southern Somalia on Wednesday in a rare ambush that comes after weeks...
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - September 23, 2021
Somalia has hosted its first public film-screening in 30 years - raising hopes of a cultural revival in the war-ravaged country. Two short films by...
Economic recovery, COVID-19 vaccines dominate Farmaajo’s UN speech
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - September 22, 2021
Outgoing President Mohamed Abdullahi Farmaajo was one of the key speakers on Tuesday in the ongoing United Nations General Assembly in New York,...
Deni oo ugu baaqay Farmaajo inuu Ra’iisal wasaaraha siiyo Fursad uu...